Mpifidy fahazoan-dàlana: Harena an-tserasera amin'ny fisafidianana ny fahazoan-dàlana CC marina | Avy amin'ny Linux
Mpifidy fahazoan-dàlana: Harena an-tserasera amin'ny fisafidianana ny Lisansa CC tsara
Manararaotra an'io taona 2021, la Fikambanana Creative Commons avy amin'ny Tsingerintaona faha-20, anio dia hitrandrahana loharano an-tserasera mahaliana sy ilaina avy amin'izy ireo, antsoina "Mpisafidy fahazoan-dàlana" o Selector.
"Mpisafidy fahazoan-dàlana" ny tanjony dia ny hanamora sy hanatsara ny fifantenana voafantina Lisansa CC ho an'ny famoronana ataon'ny antoko liana.
Amin'ny fotoana hafa dia niresaka izahay loharanom-baovao an-tserasera hafa tena ilaina amin'ny Fikambanana Creative Commons. Noho izany, toy ny mahazatra dia hiala eo ambany avy hatrany isika, hoy ny rohy voalaza lahatsoratra teo aloha mifandraika izay hanatonantsika azy, antsoina karohy:
"Ny fomba tsara indrindra hahitana votoaty marobe miaraka amin'ny fahazoan-dàlana Copyleft dia anao irery Masinina fikarohana ny fikambanana Creative Commons. Noho ity fitaovana goavambe ity dia hahita sary marobe sy atiny audiovisual maro hafa izahay izay tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny serivisy isan-karazany: Google, Flickr, Blip.tv, Jamendo, Wikimedia na SpinXpress." ¿Ahoana ny fomba hikarohana ny atiny manana lisansa Creative Commons?
Ahoana ny fomba hikarohana ny atiny manana lisansa Creative Commons
1 Mpifidy fahazoan-dàlana: Tranonkala hisafidianana ny fahazoan-dàlana CC mifanaraka amin'izany
1.1 Inona avy ireo lisansa Creative Commons?
1.1.2 Fikambanana Creative Commons
1.2 Inona ny licence chooser ary ahoana ny fomba fiasan'izy io?
1.2.1 Kinova miorina
1.2.2 Dika beta
1.3 Fampahalalana bebe kokoa momba ny Creative Commons
Mpifidy fahazoan-dàlana: Tranonkala hisafidianana ny fahazoan-dàlana CC mifanaraka amin'izany
Inona avy ireo lisansa Creative Commons?
Mba hahatakarana fohifohy, inona ireo Fahazoan-dàlana Creative Commons, ny famaritana ny mitovy nomen'ny ny Fikambanana manerantany UNESCO. Izay milaza izao manaraka izao:
"Creative Commons (CC) Lisansa dia fifanarahana modely izay manome zo hanome ampahibemaso ny zon'ny fampiasana famoahana iray arovan'ny zon'ny mpamorona. Ny fetra vitsy kokoa noho ny lisansa dia mihabe ny fahafaha-mampiasa sy mizara atiny. CC Licences dia mamela ny mpampiasa hisintona, handika, hizara, handika, hampiasa indray, hampifanaraka ary hampivelatra ny atiny tsy andoavany vola." Lisansa Creative Commons
Fikambanana Creative Commons
Na izany aza, be dia be ny zavatra vita an-tsoratra amin'ny Internet momba azy ireo. Ary ny fomba tsara indrindra hahalalana sy hianarana dia ny manatona ny loharanom-baovao ofisialy ny zavatra dinihina. Noho izany, ny filamatra dia ny fidirana amin'ny Fizarana "Lisansa" avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Fikambanana Creative Commons mba hahafahana maka hevitra sy mianatra mora foana, ary ny haben'ny voalaza Lisansa CC.
"Ireo fahazoan-dàlana Creative Commons dia manana toetra mampiavaka iraisana. Ny fahazoan-dàlana tsirairay dia manampy ny mpamorona (antsoinay hoe mpahazo alalana izy ireo raha mampiasa ny fitaovanay) hitandrina ny zon'ny mpamorona raha mamela ny hafa handika, hizara ary hampiasa ny sanganasan'izy ireo - farafaharatsiny tsy ara-barotra. Ny fahazoan-dàlana Creative Commons rehetra dia miantoka ihany koa fa ny fahazoan-dàlana nahazo ny zon'ny mpamorona fahazoan-dàlana amin'ny asany.
Miasa manerana izao tontolo izao ny fahazoan-dàlana Creative Commons ary maharitra raha mbola mihatra ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona (satria mifototra amin'izany). Ireo toetra mahazatra ireo dia fototra iorenan'ireo manana fahazoan-dàlana misafidy hanome fahazoan-dàlana bebe kokoa rehefa manapa-kevitra ny amin'ny fomba hampiasan'izy ireo ny asany izy ireo."
Inona ny licence chooser ary ahoana ny fomba fiasan'izy io?
Araka ny efa nolazainay tamin'ny fiandohan'ny famoahana, ity loharano an-tserasera an'ny Fikambanana Creative Commons, tanjona amin'ny ankapobeny, ny manamora sy manatsara ny fisafidianana CC Licences mety ho an'ny famoronana ataon'ny antoko liana.
Ary amin'izao dia manana Safidy 2 fampiasana:
Izy io dia manana interface tsotra amin'ny tarehy misokatra tokana, izay mampiseho ny safidy azo atao sy ny valiny azo isaky ny safidy.
Izy io dia manana interface intuitive sy intelligent ho toy ny tutorial na mpitari-dalana, izay tsikelikely mamela ny mpampiasa hahatratra ny tanjona hahazoana ny CC Licence mety indrindra.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Creative Commons
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Fikambanana Creative Commons, ireo loharano an-tserasera sy ny fahazoan-dàlana azonao jerena amin'ireto rohy mahasoa ireto:
20 taona Creative Commons
"Creative Commons dia fikambanana tsy mitady tombontsoa manerantany izay mamela ny famoronana sy ny fahalalana zaraina ary ampiasaina indray amin'ny alàlan'ny fanomezana fitaovana ara-dalàna maimaim-poana. Ny fitaovantsika ara-dalàna dia manampy ireo izay te hamporisika ny fampiasana indray ny asany amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo hampiasaina amin'ny fe-potoana malala-tanana sy voahaja; ho an'ireo izay te hampiasa ny sanganasa amin'ny famoronana; ary ho an'ireo izay te handray soa amin'ity simbiose ity." Inona ny Creative Commons ary inona no ataony?
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny loharano mahaliana sy mahasoa an-tserasera antsoina «Licenser Chooser» o Selector, izay an'ny tranonkalan'ny Creative Commons (CC) ary ny tanjony dia ny hanamora sy hanatsara ny fisafidianana mety Lisansa CC ho an'ny famoronana ataon'ny antoko liana; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mpifidy fahazoan-dàlana: Harena an-tserasera amin'ny fisafidianana ny Lisansa CC tsara
Steam Deck, console an'i Valve hifaninana amin'ny Switch
TaskJuggler: Rindrambaiko fitantanana tetikasa malalaka sy misokatra